निर्यात व्यापार ११ प्रतिशत बढ्यो - GalaxyPati
एमाले प्रवेश गरेका चार सांसद माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित
लामखुट्टे आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् भगाउने घरेलु उपायहरु !
१० मिनेट चुइगम चपाउँदा १० करोड ब्याक्टेरिया नष्ट !
सावधानी अपनाउनुस्: जल तथा मौसम विभाग
भोलिदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द
पहाडमा आज होली, हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न गृहको निर्देशन
निर्यात व्यापार ११ प्रतिशत बढ्यो
२०७७ मंसिर २२, सोमबार १५:४२
मुलुकको निर्यात व्यापार १०.८१ प्रतिशत बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ४ महिनामा ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो । आयात व्यापार १०.६२ प्रतिशत घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का ४ महिनामा ४ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएकामा २०७७/७८ को सोही अवधिमा ४ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
निर्यातमा भएको वृद्धि र आयातमा आएको कमीले समग्र व्यापार घाटा साढे १२ प्रतिशत घटेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा ४ खर्ब १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा ३ खर्ब ६२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा झरेको विभागको तथ्यांक छ ।
यसैगरी नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुमध्ये सबैभन्दा अघि भटमासको तेल छ । कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित भटमास रिफाइन गरेर पुनः भारत निर्यात भएको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार निर्यात भएका वस्तुमध्ये भटमासको तेल पहिलो नम्बरमा छ । तथ्यांकअनुसार पहिलो चार महिनामा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसलाई रिफाइन गरेर १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँको भटमास तेल निर्यात भएको छ । खाने तेल भारत निर्यात भएपछि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार दसैंयता मात्रै होलसेलमा प्रतिलिटर न्यूनतम १५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । होलसेलमा मूल्य बढेपछि खुद्रामा पनि त्यसको असर परेको व्यवसायी बताउँछन् ।
स्वदेशी बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण तेल भारत गएर हो । नेपालका लागि आयात गरिएको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर भारत पठाइन्छ,’ होलसेल व्यवसायी एवं टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयाँलले भने, ‘निर्यातमा कडाइ गरेलगत्तै मूल्य घट्छ ।’ उनका अनुसार मिल सञ्चालकहरूले एमआरपीमै मूल्य बढाएका छन् । तर बढेको मूल्यको बिल भने दिँदैनन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा यहाँ २० प्रतिशतसम्म बढाउने चलन छ,’ फ्युाँलले भने, ‘महँगोमा बेच्न भारत पठाइन्छ, निर्यातका नाममा जनतालाई महँगीको भार भयो ।’
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि चार महिनाको अवधिमा तेलको मूल्य करिब १४/१५ प्रतिशत बढेको बताए । ‘कच्चा पदार्थ बढेको बताउँदै मूल्य बढाइन्छ तर वास्तविक सूचना खुद्रा व्यापारीसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘तथ्यांक हेर्दा अस्वाभाविक रूपमा भारत निर्यात भइरहेको देखिन्छ ।’ खुद्रामा लिटरमै २० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको उनले जानकारी दिए । विभागका अनुसार व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा तेल आयात गर्छन् । आयातित कच्चा तेल नेपालमा रिफाइन गरिन्छ । त्यसपछि पुनः विदेश पठाइन्छ । जानकारका अनुसार यी वस्तु नेपालबाट निर्यात गर्दा महसुल लाग्दैन । अन्य मुलुकबाट नेपाल आयात गर्दा पनि भन्सार शुल्क थोरै लाग्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत निर्यात गर्दा महसुल नलाग्ने भएकाले धेरै नाफा गर्न सकिन्छ । त्यही भएर व्यवसायी कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी निर्याततर्फ आकर्षित भएका हुन् । यसअघि पाम तेलको निर्यात पहिलो नम्बरमा थियो । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित पाम तेल प्रशोधन गरेर भारत निर्यात हुन्थ्यो । भारतको वाणिज्य विभागअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले परिपत्र जारी गर्दै प्रशोधित तेलको पैठारीमा रोक लगाएको थियो । निकासीमा रोक लागेपछि निर्यात घटेको थियो ।
पाम तेलजस्तै अहिले भटमासको आयात र निर्यात बढेको छ । निर्यात भइरहेको भटमासको तेल स्वदेशी उत्पादन भने होइन । अर्बौं रुपैयाँमा निर्यात गर्ने गरी यहाँ भटमास तेल उत्पादन भइनसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । मुलुकभित्र सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा उत्पादन हुन्छ । ती क्षेत्रमा उत्पादित भटमास तराईमा बिक्री हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विभागकै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको २०७६/७७ का पहिलो चार महिनामा ५ अर्ब २० करोडको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । २०७७/७८ को सोही अवधिमा ११ अर्ब ६ करोडको आयात भएको छ । निर्यात पनि ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनामा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको भटमासको तेल २०७७/७८ को पहिलो चार महिनामा १० अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको छ ।
९ अर्ब ३८ करोडको चामल आयात
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा चामल आयात उत्साहजनक छ । यस अवधिमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको थियो । स्वदेशी उत्पादनले मागको करिब ८५ प्रतिशत मात्रै धान्ने गरेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । ‘६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा चामल वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आएको देखिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘चार महिनाको अवधिमा केही बढेको देखिए पनि कुनै महिनामा आयात कम हुन सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।
जुवामा नगद गुमाइसकेका एकजनाले पत्नीलाई नै दाउमा राखेर जुवा खेलेका छन् ।
औंला पड्काउने बानी छ ? यसो भन्छन् वैज्ञानिक
के तपाईको नङ टोक्ने बानी छ ? गम्भीर बिरामीको संकेत !
धनगढीबाट सुदूर पहाडका ५ जिल्लामा नियमित हवाई उडान, निरन्तरता दिन जोड